ESI MEPỤTA AKWỤKWỌ EDETU NA DESKTỌỌPỤ GỊ - WINDOWS - 2019
Akwụkwọ ndekọ Windows na akwụkwọ ntanetị
Mgbe a na-arụ ọrụ, ọ dị mkpa ka ị gbakọọ tụnyere ígwè, akwa ụlọ, teepu seramiiki na ụgbọ elu ndị ọzọ. Ime ya na aka adịghị mfe, ọ ka mma iji mmemme pụrụ iche. RooftileRu na-enye gị ohere ịkọwa ọkwa, gbakọọ ma họrọ otu n'ime nhọrọ ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ka anyị lebakwuo ya anya.
Mgbe mbụ ịmalite usoro ihe omume ahụ, ị ​​ga-agafe ozugbo na nchịkọta akụkọ, ebe ụgbọelu ahụ dọtara. Nhọrọ nke ngwaọrụ maka ịkepụta ihe bụ ntakịrị ihe, na ịbịaru na-eme otu akara. A na-egosipụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu n'aka ekpe, a na-agbakwụnye ntinye aha ya na nke ọ bụla e kere akara. Jiri ọrụ na-arụ ọrụ iji mee ka ọrụ dị mfe rụọ ọrụ dị mgbagwoju anya.
Ngosipụta ngosi nke nsonaazụ
Mgbe ị na-ese foto ahụ, ọ ga-aba uru ịga na ọnọdụ ngosi ọzọ iji mara ihe si na ya pụta. N'ebe a, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ otu n'ime nhọrọ nhọrọ kachasị mma. A na-ahọrọ ya site na ịkwaga ụgbọelu ahụ. Ọrụ nhazi ndị ọzọ ga-emeghe mgbe ịzụrụ mbipute zuru ezu nke usoro ihe omume ahụ.
Anyị na-akwado ka ị mata ihe ọmụma banyere ọrụ ahụ. Ya mere, ị nwere ike ịchọpụta ebe ọdịdị ahụ na modulu, nweta ozi gbasara nọmba achọrọ achọrọ ma lee akụkọ banyere ọnụ ọgụgụ nke enweghị ohere dị ka pasent.
RooftileRu na-arụ ọrụ dịka algọridim a kara aka, ya mere, elu nke akwụkwọ ahụ bụ mgbe ọtụtụ okpukpu nke otu modul na ọnụọgụ nyere. Ndị ọrụ nwere ike iji aka ha dezie algọridim a site na iji modulu ndị ọzọ na ndị ahịa. A na-ahazi ntọala a na windo a raara nye.
Ihe odide ahụ zuru ezu dị maka ibipụta akwụkwọ ọbụlagodi n'emebughị. Naanị gaa na menu. "Bipute", ịmatakwu ihe ngosi ahụ site na nlele, debe ntọala ma zipụ akwụkwọ ahụ iji bipụta. Echefukwala jikọọ ngwa ngwa na kọmputa tupu oge.
Ngwakọta ngwa ngwa na nke ziri ezi.
A na-ekesa usoro zuru ezu nke usoro ihe a maka ego;
Na ngosipụta ngosipụta arụmọrụ na-ejedebeghị.
Na nyocha a RooftileRu n'elu. Anyị ji nlezianya mara onwe anyị na ọrụ ya, ikike, ma weta uru na ọghọm. Ihe omume a bara uru nye ndị chọrọ igosi ngwongwo, ụlọ ma ọ bụ tile. Tupu ịzụta ụdị zuru ezu, anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na mbipute ikpe ahụ.
Download usoro ikpe nke RooftileRu
Mmemme maka ịkọkọta ụlọ Ihe atụ Nhazi ụlọ Ahịa ahịa
RooftileRu - mmemme nke na-enye gị ohere ịme nyocha nke ígwè, ụlọ elu, ala na ụgbọ elu ndị ọzọ. Usoro a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ejighị ya rụọ ọrụ, ma onye ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ nhọrọ maka ịhọrọ.
Onye Mmepụta: MK Profaịlụ
Ọnụ: $ 150